ကျားကွဲရင် ခွေးအ ဆွဲမယ် (ဆောင်းပါးရှင် ထွန်းအောင်ကျော်) ~ ဒီမိုဝေယံ
ကျားကွဲရင် ခွေးအ ဆွဲမယ် (ဆောင်းပါးရှင် ထွန်းအောင်ကျော်)
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ မှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့် ရွေးကောက်ပွဲဝင်ရန် ဆုံးဖြတ်ခြင်းအပေါ် ဒီမိုကရေစီအင်အားစုများ အတွင်းသဘောတူ ထောက်ခံသူများနှင့် သဘောမတူသူများ အကြားအငြင်းပွါးလာခဲ့ပြီး စစ်အာဏာရှင်ကို မတိုက်နိုင်တော့ဘဲ အချင်းချင်း ငြင်းခုံကြရင်းဘုံရန်သူ ပျောက်၍ စစ်အာဏာရှင်အကြိုက် တဦးနှင့်တဦး လက်ညှိုးထိုး၊ ရန်တွေ့ရင်း တဝဲလည်လည်သွေး ကွဲကြ ပြန်သည်။ ကျားကွဲတော့ ခွေးအများက ဝိုင်းဆွဲခြင်းကိုခံရ တော့မည့်ကိန်း ယနေ့ဒီမိုကရေစီအင်အား စုများအတွင်း ဆိုက်ရောက်နေသဖြင့် သတိပေးနှိုး ဆော် လိုက်ရပေတော့သည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နေရာမှ စဉ်းစားကြည့်ခြင်း။
၁။ ဒေါ်စုနေအိမ်အကျယ်ချုပ်ဖြင့် စုစုပေါင်း၁၃နှစ်နေခဲ့စဉ် NLDပါတီသည် ပါတီဝင်သန်းကျော်မှ သောင်းဂဏန်းပင် မရှိသလောက် အဖွဲ့ဝင်ဦးရေ ကျဆင်းခဲ့ရသလို နယ်ပါတီရုံးများသည်လည်း ဆိုင်းဘုတ်ပါမကျန် ဖြုတ်သိမ်းပိတ်ပင်ခြင်း ခံခဲ့ရသည်မှာ အများအသိပင်ဖြစ်သည်။
၂။ ပါတီခေါင်းဆောင်ပိုင်းတွင်လည်း သက်ကြီးရွယ်အိုများက အများစုဖြစ်နေပြီး ပါတီကိုဦး မဆောင်နိုင်ဘဲ ရွှေဝါရောင် သံဃာ့အရေးအခင်းတွင် လူထုနှင့်မပေါင်းစပ်နိုင်ဘဲ ဘေးရှောင် နေခဲ့သည့်အထိ အရုပ်ဆိုး အကျဉ်းတန်ခဲ့သည်။
ထိုအခြေအနေတွင် နေအိမ်အကျယ်ချုပ်မှ လွတ်လာသောဒေါ်စုအနေနှင့် ဘယ်လိုရပ်တည်ရမလဲ? အင်အားချိနဲ့နေသော သူမပါတီကို ဘယ်လို ပြန်လည် တည်ဆောက်ယူမလဲ? နအဖနဲ့ဆက်လက်၍ ထိပ်တိုက်တွေ့ပြီး နေအိမ် အကျယ်ချုပ် ပြန်နေမလား?၊ ဒေါ်စုအနေနဲ့ စဉ်းစားမှာအမှန်ပါ။ ဒီအချိန်မှာ ဦးသိန်းစိန်တို့ကလဲ ဗိုက်နာနေပြီ၊ သူ့ရဲ့စစ်ရုပ်သေး အစိုးရကို အာဆီယံက ထောက်ခံ ပြီးလာမဲ့ အာဆီယံအစည်းအဝေး မှာဥက္ကဌ ရာထူးရဘို့ အရှေ့တောင်အာရှမှာ လူရာဝင်ဘို့ရယ်၊ အနောက်နိုင်ငံ တွေ ကပိတ်ထားတဲ့ စီးပွါးရေးပိတ်ဆို့မှု တွေကို ရုတ်သိမ်းဘို့ ဒေါ်စုကိုချဉ်းကပ်လာခဲ့တယ်၊ မချည်းကပ်လို့ လဲမဖြစ်ဘူး၊ တိုင်းပြည်သံယံဇာ တတွေရောင်းလို့ရတဲ့ ငွေတွေကသန်းရွှေနဲ့ ခိုးသားငါးရာက ဗျောင် ယူထားပြီးပြီ၊ သဘာဝ ဓါတ်ငွေ့ရောင်းရငွေ ဘီလီယံလိုက် သန်းရွှေကယူလိုက်တဲ့အတွက် သိန်းစိန်တို့ အစိုးရနိုင်ငံခြား အကူလိုတယ်၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ ဒီလိုအပ်ချက်ရဲ့ အဖြေဖြစ်တယ်။ နိုင်ငံတကာကအသိ အမှတ်ပြုထားတဲ့ ခေါင်းဆောင်ဒေါ်စုကို စည်းရုံးဘို့ သူ့ရုံးခန်းမှာ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ပုံကြီးကို ချိတ်ပြီး တွေ့ဆုံခဲ့တာ အများအသိပါ။
ဒီနေရာမှာဒေါ်စုက NLD ပါတီရပ်တည်ရေး၊ ဗဟိုကော်မီတီကို လူသစ်သွေးသစ်တွေနဲ့ ပြန်လည် ဖွဲ့စည်း နိုင်ဘို့အရေးတွေကို စဉ်းစားပြီး စစ်ရုပ်သေး အစိုးရနဲ့သူတို့ဘက်က စပြီးကမ်းလှန်း လာမှုအပေါ် လက်တွေ့ကျကျ ပေးလာတဲ့ အခြေအနေအရ ဦးသိန်းစိန်တို့ရဲ့ ကစားကွက်ကိုပြန် လှန်ပြီး အောက်ကြေးကနေ ပြန်ကစားတယ်လို့ ယူဆတယ်၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ သန်းရွှေတို့ မလုပ်တဲ့အလုပ်ကို သိန်းစိန်က ပျော့ပျော့ ပြောင်းပြောင်းလုပ်လာ တော့ဒေါ်စုကလဲနဂို တင်းမာ ရေးကနေ ပြောင်းလဲလာတဲ့ အခြေအနေအရ သူဆက်တိုက် တောင်းလာတဲ့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးလမ်း ပွင့်လာတဲ့အတွက် သူ့ဘက်ကလဲ အစွမ်းကုန်တဖက်နဲ့ တဖက်ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှုတွေ လုပ်လာခဲ့တာ ဖြစ်တယ်လို့မြင်တယ်။ သိန်းစိန်ဟာ တကယ်ပြုပြင်ပြောင်း လဲလိုသူလား၊ ရုပ်ပြလား ဆိုတာဘာလီ အစည်းအဝေးမှာ သူပြောလိုက်တဲ့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား ဆိုတာမရှိဘူး၊ ပြစ်မှု တခုခုကို ကျူးလွန်လို့ အကျဉ်းကျနေတဲ့ သူတွေဘဲရှိတယ်လို့ ပြောလိုက်ခြင်းကြောင့် “ဒီပုတ်ထဲ ကဒီပဲ” ဘဲဆိုတာ ထင်ရှားစေခဲ့တယ်။
ဒေါ်စုကလဲ သူ့ကိုယ်သူအစားခံပြီး ကင်းယူဘို့လုပ်တာ ထင်ရှားတယ်၊ ပွင့်လာတဲ့အပေါက်ကလေးကိုချဲ့ပြီး တဖြေးဖြေးဝင်မယ် ဆိုတာသူမနဲ့ NLD ရဲ့သမိုင်းဘဲ၊ သူတို့ရဲ့ကြံရည်ဖန်ရည်၊ ကံဥာဏ် ဝိရိယ အ ပေါ်မှာ မူတည်ပြီး ဒီလမ်းကြောင်းဟာမှန်တယ်၊ မှားတယ်ဆိုတာ သမိုင်းကဆုံးဖြတ် သွားမှာဖြစ်တယ်။ အခုကတည်းက ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ် ဆိုပြီးပက်ပက်စက်စက် ဝေဖန် နေသူတွေထဲမှာ ဆိုက်ဝါးတွေ ကြိမ်းသေပါတယ်။ သူ့လူကိုယ့်ဘက်သားတွေ အများကြီးဘဲဆိုတာ သတိရှိဘို့လိုတယ်။ အပြတ်သားဆုံး ပြောနိုင်တာက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ ရန်သူမဟုတ်ဘူး ဆိုတာဘဲ၊ ရန်သူရဲ့အဝန်းအဝိုင်းထဲ ကို တိုက်ဘို့ စွန့်ပြီးဝင်သွားတဲ့ သူရဲကောင်း တယောက် လို့မှတ်ယူနိုင်တာက ပိုကောင်းတယ်လို့ မြင်တယ်။ ဒီလိုမြင်တာဟာ အားလုံးအတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်။ သူအခွင့်အရေးရဘို့၊ သူနံမည်ကျော်ကြားဘို့ လုပ်နေတာ မဟုတ်တာတော့ ကျိန်းသေတယ်၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ သူမဟာ ကမ္ဘာသိကျော်ကြားပြီး သူဖြစ်နေလို့ပါဘဲ။ သူလုပ်နေတာ တိုင်းပြည်အတွက်၊ ပြည်သူတွေအတွက်ဘဲ၊ သူသွားတဲ့လမ်းကို လက်မခံ နိုင်တောင်၊ သူ့စေတနာကို အနည်းဆုံး နားလည်ပေးနိုင်ဘို့ လိုတယ်။
ပြည်ပကနေ ဒေါ်စုကိုဆဲနေသူတွေကို ပြောချင်တာက ဒေါ်စုသာသူတို့လို ပြည်ပကိုထွက်လာရင် ငွေသန်း ချီပုံပေးမဲ့သူတွေ အများကြီးရှိတယ် ဆိုတာပါဘဲ၊ ပြည်ပမှာကောင်းကောင်း ဇိမ်နဲ့နေနိုင် ရဲ့သားနဲ့ ပြည်တွင်းမှာ သားတွေကိုပစ်ပြီး တိုင်းပြည်နဲ့ လူမျိုးကိုငဲ့ပြီး နေနေတာကိုက လေးစား ထိုက်တယ်ဆိုတာပါဘဲ။
ဒါကြောင့်ဒေါ်စုသွားတဲ့ လမ်းကြောင်းကို မကြိုက်ရင်ဘာလုပ်ကြမလဲ?
ဒေါ်စုသွားနေတဲ့လမ်းကို မကြိုက်ရင် ကိုယ့်လမ်းကိုယ်ထွင် ယုံဘဲရှိတယ်၊ အချင်းချင်းပုတ်ခတ် တိုက်ခိုက်နေစရာ မလိုဘူး၊ ရန်သူအားရအောင် လုပ်နေစရာ မလိုအပ်ဘူး။ အခုဖြစ် နေတဲ့ပြသနာက ကိုယ်ကလည်း ဘာမှမလုပ်နိုင် လုပ်နိုင်သလောက် လုပ်နေသူတွေကို တစ်တစ်ခွခွဆဲပြီး ရဲရဲ တောက် သူရဲကောင်းကြီးတွေလို လုပ်နေတာ အတော်အကြည့်ရ ဆိုးပါတယ်၊ နှစ်၂၀ ကျော်ဖြတ် သန်း လာပြီး ရင့်ကျက်လာသူတွေ ဖြစ်မလာကြဘူး၊ ကိုယ်ကဘာတွေ လုပ်နေတယ် ဘာမှမပြောနိုင်ဘဲ ဒေါ်စုကို လက်ညှိုးထိုး ပြောနေကြသူတွေ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဘာလုပ်နိုင်သလဲ၊ ဘာတွေလုပ် ပြီးပြီလဲ မေးကြည့်ကြ ဘို့လိုပြီ။
ကျွန်တော်အနေနဲ့ ကတော့ ဒေါ်စုရွေးတဲ့လမ်းက ရေရှည်ကြာနိုင်တယ်လို့မြင်တယ်၊ မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ တော့မပြောဘူး။
တခုပြောနိုင်တာက အခုလစ်လပ်သွားတဲ့ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် နေရာ၄၀ လောက်ကို ဝင် ပြိုင်ခြင်းဖြင့်ရလာမဲ့ လက်တဆုပ်စာအမတ်လောက်နဲ့ ကြံဖွတ်ရဲ့ ၂၀၀၈ နာဂစ်အခြေခံဥပဒေကို ဒီမိုကရေစီနည်းကျ ပြောင်းလဲနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာဘဲ။ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေ မလွှတ်ဘဲ အားလုံး ပါ ဝင်နိုင်မှုမပေးဘဲ လုပ်မဲ့ကြားဖြတ်ရွေးကောက် ပွဲဟာ NLD ကအားလုံး နေရာရစေအုံး လွှတ်တော် ထဲ မှာ အခြေခံဥပဒေကို ပြင်ဆင် ဘို့တတ်နိုင်မှာ မဟုတ်ဘူး။ ဒါကြောင့်ရေရှည်မယ်၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒေ ဟာ ၁၉၉၂ ခုနှစ်လောက်ကစပြီး စစ်အာဏာအသာစီးရရေးအတွက် နှစ်ပေါင်း ၁၅ နှစ်ကျော် စိမ်ပြေနပြေ ရေးဆွဲထားတဲ့ သူတို့အသက်ပေး စောင့်ရှောက်ရမဲ့ ဥပဒေဖြစ်တယ်။ ဒီဥပဒေ ကိုမပြင်နိုင် အောင်လွှတ်တော်အမတ် ၂၀%က တင်သွင်းရမယ်၊ နောက်လွှတ်တော်အမတ် ၇၅% ကျော် က ထောက်ခံအတည်ပြုရမယ်၊ အတည်ပြုခဲ့ရင်လဲ ပြည်သူ့ဆန္ဒခံယူ အတည်ပြုရအုံးမယ် ဆိုတော့ အတော်ခက်မဲ့ အလုပ်ပါ။
နောက်ပြီး လွှတ်တော်ထဲမှာ စစ်ဗိုလ်တမတ်သား ရှိနေတော့ကျန်၇၅% က အားလုံးကိုယ့်လူတွေ ဖြစ်နေရမယ်။ အဲဒီ့တမတ်သားထဲက အနည်းဆုံးတယောက် ပါလာရအုံးမယ်။ အဲဒီတော့မှ ပြင်ခွင့်ရမှာ အခုကြံ ဖွတ်ကလွှတ်တော်ထဲမှာ အင်အားအကြီးဆုံးဆိုတော့ ဦးသိန်းစိန်ရဲ့ သက်တမ်း ၅ နှစ်အတွင်း မှာ ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှ မပြောင်းလဲနိုင်ဘူး ဒါပေမဲ့ပါတီကို ၄နှစ်လောက် အချိန်ယူပြီး တောင့်တင်းလာအောင် ပြုစုပျိုးထောင်ဖို့ အကျိုးအမြတ်တော့ရမှာပါ။ နောက်သက်တမ်း၂၀၁၅ မှာတော့ NLD အတွက် နိုင်ဘို့လမ်းရှိတယ်၊ မဲလိမ်မဲခိုးမရှိရင်ပေါ့၊ ဒါကြောင့် NLD ရဲ့ရည်မှန်းချက်ဟာ ၂၀၁၅ ဖြစ်ဘို့များတယ်။ ၂၀၁၂ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲဟာ အကြွင်း အကျန် ကောက်ယူရတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်လို့ ဒေါ်စုတို့လို အမျိုးသားခေါင်းဆောင် နေရာကိုရောက် နေတဲ့သူအနေနဲ့ ဝင်မပြိုင်ဘဲ ပါတီခေါင်းဆောင် နေရာကနေပြီး ၂၀၁၅ အထိစောင့်မယ်ဆိုရင် တော့ဒေါ်စုအတွက်ကော တိုင်းပြည်အတွက်ကော အောင်မြင် မှုပိုရနိုင်မယ်လို့ ခန့်မှန်းမိပါတယ်။
ဒီမိုကရေစီပန်းတိုင်ရောက်ဘို့ ဘယ်လမ်းကိုရွေးရရွေးရ၊ ရဘို့က အရေးကြီးတယ်လို့ မြင်တယ်၊ ဒါကြောင့် လက်နက်ကိုင် တော်လှန်ရေးကို သန်တဲ့သူကလဲ လက်နက်ကိုင်လမ်းစဉ်ကို အင်အား ကောင်းလာအောင်လုပ်၊ လူထုလှုပ်ရှားမှုကို ယုံကြည်သူကလဲ၊ လူထုတွင်းဝင်ပြီး စည်းရုံးလူထု လှုပ်ရှားမှုတွေကို တွန်းတင် ယုံကြည်ချက်တူသူတွေကို စုစည်းပြီးလုပ်ကြမယ်ဆိုရင် ဘယ် သူ မှားတယ် ဘယ်သူမှန်တယ် လုပ်စရာမလိုဘဲ ကိုယ့်အလုပ်ကိုယ် လုပ်ကြရင်း ဆုံချက်တခုမှာ တွေ့ကြမှာဘဲ၊ အဲဒီဆုံချက်ကတော့ ဒီမိုကရေစီပန်း တိုင်ဘဲ။
လူထုလှုပ်ရှားမှု အားကောင်းလာတာနဲ့အမျှ လွှတ်တော်အတွင်းရှိ ဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေ အတွက် Leverage power လို့ခေါ်တဲ့ အင်အားချိန်ခွင်လျှာလဲ မြင့်တက်လာမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် တဖွဲ့နဲ့တဖွဲ့ အပြန်အလှန် အကျိုးပြုတယ်ဆိုတာ တွေ့ရမှာပါ၊ လွှတ်တော်တွင်းမှာလဲ လွတ်လပ် သော လူထုလူတန်းစား အဖွဲ့အစည်း (Civil Society) များလွတ်လပ် စွာဖွဲ့စည်းခွင့်ရရှိရေး၊ မိမိ လူတန်းစားများကို ကိုယ်စားပြု လှုပ်ရှားခွင့်ရရှိရေးတို့ကို တောင်းဆိုပေးမယ်၊ ကြိုးစားပြီးရလာ အောင်လုပ်ကြမယ်ဆိုရင် ဒီလိုအဖွဲ့ အစည်းတွေဟာ သူတို့ရဲ့ရပိုင်ခွင့်တွေကို တောင်းဆို တိုက်ပွဲ ဝင်ရင်း လူထုလှုပ်ရှားမှုထဲမှာ ပါလာမှာဖြစ်တယ်၊ အဓိကနားလည်ထားဘို့က လွှတ်တော်ထဲက ဘဲတိုက်တိုက်၊ လူထုလှုပ်ရှားမှုနဲ့ဘဲ တိုက်တိုက်၊ လက်နက်ကိုင်နည်းနဲ့ဘဲ တိုက်တိုက် တခုနဲ့တခုအပြန် အလှန် အကျိုးပြုကြတယ် ဆိုတာပါဘဲ။ သူမှားတယ်ငါမှန်တယ် မရှိပါဘူး၊ ကြိုးစားလုပ် ကြတာချင်း အတူတူ ကံ၊ဥာဏ်၊ဝိရိယ သာတဲ့သူက တက်သွားမှာဘဲ။ နောက်ဆုံး ဘယ်နည်းနဲ့ဘဲ အောင်ပွဲခံခံ အားလုံးလို ချင်တဲ့ပန်းတိုင် ရောက်ဘို့က လိုရင်းဘဲလေ၊ ဘယ်သူအောင်အောင် အားလုံး အကျိုးခံစားကြရမှာဘဲ။
ဦးသိန်းစိန်အစိုးရ ဖွဲ့စည်းပြီးနောက် ကမ္ဘာသိ မဲလိမ်မဲခိုးမှုကြောင့် ဂုဏ်သိက္ခာမရှိခြင်းမှ ဂုဏ်သိက္ခာရှိလာ စေရန်နှင့် တရားမဝင်ခြင်းမှ တရားဝင်ဖြစ်လာစေရန် ဆောင်ရွက်ရာ၌ ပထမဦးစွာ-
(၂) မြစ်ဆုံရေကာတာ စီမံကိန်းကို ရပ်တန့်လိုက်ခြင်း။
(၃) စာပေစီစစ်ရေးတင်းကြပ်မှုကို လျော့ချလိုက်ခြင်း။
(၄) အင်တာနက်တင်းကြပ်ထားမှုကို လျော့ချလိုက်ခြင်း။
တို့ကိုပြုလုပ်ပြခဲ့သည့် အတွက် ဇော်ဦး ဦးစီးသည့် ဗဟုအဖွဲ့၊ ဟန်ညောင်ဝေ ဦးစီးသည့် ယူရိုဘားမားရုံး၊ ပြည်တွင်း အင်ဂျီအိုတပိုင်း။ စာနယ်ဇင်းတပိုင်း နံမည်ခံထားသော အီးဂရက်ပိုင်ရှင်နေဝင်းမောင်၊ ပညာရှင်အမည်ခံ ကျော်ရင်လှိုင် တို့မှဘေးတီး၊ ဖျာခင်းခြင်းတို့ဖြင့် ထောက်ခံခဲ့ကြသည်။ ထိုသို့အပြုသဘောဆောင်ကြောင်း အပေါင်းလက္ခဏာ ဖြစ်သည်ဟု သာကူးများ နအဖအလိုတော်ရိများက ပြောနေသည့် အထက်ပါအချက် လေးချက်ကို လေ့လာလျှင်-
၁။ ဒေါ်စုနှင့်တွေ့ဆုံခြင်း အတိမ်အနက်ကို ယနေ့အထိ ထုတ်ဖေါ်ပြောဆိုခြင်း မရှိခြင်း ။
၂။ မြစ်ဆုံရေကာတာ စီမံကိန်းရပ်ဆိုင်းထားခြင်းသာ ဖြစ်သည်၊ အချိန်မရွေးပြန်စနိုင်သည်။
၃။ စာပေစီစစ်ရေး တင်းကြပ်မှုကို လျော့ချလိုက်သော်လည်း ဆင်ဆာဘုတ်အဖွဲ့သည် ဆက်လက် တည်ရှိနေပြီး လွတ်လပ်စွာရေးသား ထုတ်ဝေခွင့်ကို တားဆီးနေသည့် ယန္တရားအဖြစ် အလုပ်လုပ် နေစဲဖြစ်ခြင်း။
၄။ အင်တာနက်တင်းကြပ်မှုကို လျော့ချလိုက်သော်လည်း၊ ကမ္ဘာ့အနှေးဆုံး အင်တာနက် အဖြစ်လည်းကောင်း၊ ခေတ်နှင့်အညီ တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးသော ချမ်းသာကြွယ်ဝသည့် နိုင်ငံကြီးများထက် စံချိန်တင်လောက်အောင် တလဒေါ်လာ၈၀ခန့် အထိပြည်သူများက ပေးနေရသဖြင့် ဆင်းရဲသော ကျောင်းသားလူငယ်များ မတတ်နိုင်ခြင်း။ (ခေတ်မှီသော အမေရိကန်နိုင်ငံတွင် ၁၉ မှ ၃၀ ဒေါ်လာ အတွင်းသာ အမြန်နှုန်း အလိုက်ပေးရသည်)။
ထိုပြောင်းလဲလာခြင်း အားလုံးသည် အပြည့်အဝပြောင်းလဲခြင်းမျိုး မဟုတ်ဘဲ တဝက်တပျက် တိုးလို့တန်းလန်း ပြောင်းလဲပြထားခြင်းသာ ဖြစ်သည်။ ထိုကဲ့သို့ ဟန်ပြ ပြောင်းလဲခြင်းကြောင့် ရရှိလာသော အကျိုးအမြတ်မှာလည်း ကြီးမားလှသည်။ လူအများက ဒလံများ၊ အလံရှူးများ၏ သမိုင်းတဆစ် ချိုးလာခြင်း၊ ဒီမိုကရေစီလမ်းပေါ်သို့ ပထမခြေလှမ်းစသည်ဖြင့် ပြောစကားများကြောင့် အကောင်းမြင်လာကြပြီး အမှန်တကယ် ပြောင်းတော့မည်ဟု ထင်လာကြသည်။ ထို့ပြင်အကျဉ်းသား တသောင်းကျော် လွှတ်ပေးလိုက်ပြန်သောအခါ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား အားလုံးကိုမကြာ မှီလွှတ်တော့မယောင် အစိုးရအကြံပေးများက ဘေးတီးပေးကြပြန်သဖြင့် ပြည်တွင်းပြည်ပမှ မယုံတဝက်ယုံတဝက်ဖြင့် မျှော်လင့်ကြီးစွာ စောင့်စားရင်း မိမိတို့လင်၊ သား ၊တူ ၊ညီ ၊ညီမ တို့များ လွှတ်လေ မလားဟု မျှော်ကြပြန်သည်။
အရှေ့တောင် အာရှနိုင်ငံများမှလည်း သိန်းစိန်လုပ်ရပ်ကို ရွှန်းရွှန်းဝေအောင် ချီးကျူးရင်း ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ် ရောက်လာပြီဟု ဆိုလာရင်းအာစီယံ၏ ဥက္ကဌ အဖြစ် လွယ်လွယ်ကူကူ လက်ခံလိုက်ကြသည်။
ထိုမှတဆင့်ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေကို စတိပြင်ဆင်ပေးလိုက်သောအခါ NLD မှတ်ပုံခြင်းနှင့် ဒေါ်စုပါ ရွေး ကောက်ပွဲဝင်တော့မည်အထိ ဗိုလ်သိန်းစိန်တို့က စိတ်ဓါတ်ရေးရာတိုက်ပွဲတွင် ဆရာကြီးဗိုလ် သန်းရွှေ၏ အကွက်ဆင်မှုအောက်မှ နေ၍လှလှပပ ကပြသွားခဲ့သည်။
အမေရိကန်ကလည်း နှစ်ငါးဆယ်အတွင်း အမြင့်ဆုံးသံတမာန် ဖြစ်သည့် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဟီလာရီကလင်တန်ကို စေလွှတ်လိုက်ပြန်သည်။ မြန်မာအစိုးရ အကြံပေးဦးကိုကိုလှိုင် ကလည်း အစိုးရကလုပ် သင့်သော လုပ်ရပ်ကြီးကို လုပ်ပေးပြီးဖြစ်သဖြင့် အမေရိကန်အစိုးရမှ စီးပွါးရေးပိတ်ဆို့မှုကို ရုပ်သိမ်းတော့မည်ဟု မျှော်လင့်ကြောင်း စကားကြောင်းလာခဲ့သည်။
သမတအကြံပေး ဦးကိုကိုလှိုင်၏ လုပ်သင့်သော လုပ်ရပ်ကြီးလုပ်ပေးပြီးပြီ ဆိုသည်မှာ ဘာလုပ် ရပ်ကိုဆိုလိုပါသလဲ? ကျွန်တော်မြင်သော အဓိက လုပ်သင့် သောလုပ်ရပ်မှာ နိုင်ငံရေးအကျဉ်း သားများအားလုံး လုံးဝလွတ်မြောက်ရေးပင် ဖြစ်သည်။ အမေရိကန်သည် ထိုအချက်ကို ကောင်းစွာ သဘောပေါက်မည်ဟု မျှော်လင့်မိသည်။ ထိုလုပ်ရပ်ကြီးကို မလုပ်သ၍ စီးပွါးရေးပိတ်ဆို့မှုကို ဆက်လက်ထားခြင်းဖြင့် နအဖ၏ လည်ပင်းကို ညစ်ထားပြီး သေဖော်သေဖက် ရဲဘော်များ လွတ်မြောက်ရေးကို မျှော်မှန်းရင်း လူထုအုံကြွမှုကြီးကို မြှင့်တင်ရပေတော့မည်။
ကျွန်တော့်အမြင်အရ အာရပ်အုံကြွမှုကဲ့သို့ အုံကြွမှုမျိုး မြန်မာနိုင်ငံတွင် များစွာဖြစ်နိုင်ချေ ရှိနေပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံသည် တော်လှန်ရေးတခု အဖြစ်ပေါက်ကွဲလာရန် တာစူလျက် ရှိနေပြီဖြစ်သည် သိန်းစိန်အစိုးရ ညစ်ပတ်၍ရွေးကောက်ပွဲ အနိုင်ရသွားခြင်းကို အလွန်ကြိုက်ပါသည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် မြန်မာနိုင်ငံလို လူမှုရေး၊ စီးပွားရေး၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး ငြိမ်းချမ်း ရေးစသည်တို့ အဖက်ဖက်မှ ချွတ်ခြုံကျနေသော နိုင်ငံကိုဘယ်လိုနည်းနှင့်မျှ တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးလာစေရန် သိန်းစိန်အစိုးရက မတတ်နိုင်ပါ၊ ထိုကြောင့် သူ့သက်တန်းပြည့် အုပ်ချုပ်ရေးကာလတွင် ပြည် သူ၏ လိုလားထောက်ခံမှုကို ရနိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ တိုင်းပြည်စီးပွားရေး ပိုမို၍ကြပ်တည်း လာဘို့သာရှိပါသည်၊ ကြပ်တည်းလာလေ အုံကြွမှုဖြစ်နိုင်ချေ များလေဖြစ်သဖြင့် လူထုကြီးကိုဦး ဆောင်နိုင်သော ခေါင်းဆောင်လူငယ်များကို စံနစ်တကျ လေ့ကျင့်ပေးထားဘို့ သာလိုကြောင်း တင်ပြအပ်ပါသည်။
နိုဝင်ဘာလ ၂၈ ရက် ၂၀၁၁